Muraayadaha Apple AR ayaa gaabiya horumarkooda sida ku xusan DigiTimes | Waxaan ka socdaa mac
Waxyaabaha ku saabsan Apple ee muraayadaha dhabta ah ee la kordhiyay waxay u egyihiin waxoogaa la mid ah ama xitaa ka xun qadarka wararka xanta ah ee aan ka haynay AirTags. Uguyaraan kuwa dambe ayaa horeyba loo heli karaa, dadka isticmaala waxay bilaabi doonaan inay soo helaan usbuucaan laakiin marka laga hadlayo muraayadaha Apple imika waa xan cusub oo ay bilaabeen DigiTimes kadibna lagu daabacay warbaahinta sida MacRumors, waxay ka digeysaa dib u dhac ku yimaada horumarinta noocyada muraayadaha casriga ah.
Waxay u muuqataa in muraayadaha dhabta ah ee Apple ee la kordhiyay ay tahay inay galaan wajiga labaad ee horumarinta inta lagu gudajiray bilahaan, gaar ahaan bisha Janaayo ayaa looga hadlay bilowga wajigan. Hadda macluumaadka ay u suuragashay inay ka helaan daabacaadda Taiwanese muraayadaha indhaha ayaa weli fadhiya wajiga koowaad ee horumarkooda.
Tani waxay ka dhigan tahay in suurtagalnimada bilowga soo saarista muraayadaha oo loo maleynayay in la qorsheeyay rubuca hore ee sanadka 2022 ay dib u dhaceyso. Kani waa mashruuc muddo dheer soconaya waxayna umuuqataa inuu mari doono heerar kala duwan marka loo eego moodooyinka noocooda ah. Warbixinno kala duwan oo warbaahineed sida Bloomberg, ayaa sheegtay in muraayadahaasi la sii deyn doono bartamaha illaa dhammaadka sanadka 2022. Dabcan waxay umuuqataa mashruuc ka mid ah kuwa muhiimka ah Apple oo kan uu bilaabayo in lagu xanto mustaqbalka fog.
Waxaa jira dhowr nooc oo lagu xamanayo kuwaan Muraayadaha casriga ah ee Apple-ka ee xaqiiqda la kordhiyay iyo tan dhabta ah. Labada mashruucba waxay qaadi lahaayeen wadadooda iyo talaabooyin u gaar ah oo ay ku bilaabayaan wax soo saar, markaa ma aaminsani in sanadkaan la arki karo oo aysan aheyn bilowga soo socda ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Muraayadaha Apple-ka ee loo yaqaan 'AR' ayaa hoos u dhigaya horumarkiisa sida ay sheegtay DigiTimes